Previous Article FIFA: Naijiria Arịgotala
Next Article Otu Egwu Bọọlụ Ala Anyị Akwadowela
Ndị otu egwu bọọlụ ala anyị, Naijiria, nọrọ na mgbede Tuzdee were gosi ndị ogbo ha na mba Ijipt na nwoke na nwoke ha bụ n'okwu ọnụ. Pọl Onuachu nyere goolu site na yadị iri abụọ, na mbido mbụ ya dịka onye otu egwú bọọlụ ala anyị, mere Naijiria jiri merie Ijipt na asọmpi enyi na enyi ahụ agbara na ama egwuregwu Stephen Keshi dị na Asaba.
Mmeri nkea bụ mmeri nke abụọ Naijiria nwetara n'ụbọchị anọ ka ha merichara mba Seychelles ọkpụ atọ asatara nanị otu na ngalaba E n'asọmpi eji amara ndị ga-etozu ịsonye na iko Africa n'ámá egwuregwu ahụ.
Onuachu, onye nọchiri Odion Ighalo na ndị bidoro bọọlụ, kpara onye Ijipt tupu ọ gbanye bọọlụ ahụ n'ọnụ goolu maka goolu mbụ ya na mpụta abụọ dịka onye egwu bọọlụ Naijiria.
Onuachu nyere goolu ahụ ndị Naịjirịa ji were merie na nkeji mbụ nke asọmpi ahụ, ebe ndị Ijipt bụzi ndị gbara mbọ ka ha gbata ihe na asọmpi ahụ mana mbọ ha niile wụrụ n'ala.
Ndị Naịjirịa were ọnọdụ ma na-ahazi ihe ha mara eme nke ọma dịka ha n'eti mba Ijipt mmanwụ, mana Hassan Mahmoud chọrọ ime Naijiria echeta ebewe site n'adọba agbaa nke ha jiri megharịa onye ọ bụla anya mana Daniel Akpenyi na-eche goolu jidere ya bụ bọọlụ n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ijipt nwere ohere ọzọ dị iche iche mana oche goolu, Ikechukwu Ezenwa, onye nọchiri Daniel Akpenyi n'agba nke abụọ, gosiri na ya zuru okè n'ihe a na-eme site n'ichewa ndị Ijipt obi.
Mohammed Salah, bụzi onye na-esoghi gbaa ya bụ asọmpi.